बजारलाई बलियो बनाउने १० कारण केके हुन् ?
पछिल्लो दुई वर्षयता पुँजी बजारमा बेस्सरी चहलपहल बढेको छ । लगानीकर्ता थपिएका छन् । लगानी थपिएको छ । सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढेको छ । यो बजारको राम्रो पक्ष भयो ।
पाँच वर्षअघिको बजार फर्केर हेर्ने हो भने त्यसबेला बजारलाई चाहिने आधारभूत पक्ष वास्तवमा केही पनि थिएन । अहिले धमाधम आधारभूत पक्ष मजबुत बनाउने काम भइरहेको छ । पुँजी बजारका १० वटा पक्ष, जसले बजारलाई नयाँ उचाईमा लैजान सहयोग गरेको छ । बजार अझै परिपक्क बनाउन सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि उत्तिकै छन् ।
१. सेयर ऋण
डिम्याट प्रणालीबाट कारोबार हुन थालेपछि लगानीकर्ताले सेयर किनेको पाँच दिनमै सेयर कर्जा पाउन सक्ने भएका छन् । कागजी प्रणालीमा ऋण लिन निकै झन्झट थियो । सेयर किनेर नामसारीमा पठाउन महिनौं लाग्ने भएकाले पनि लगानीकर्तालाई दुःख थियो । अहिले डिम्याट सेयरमा सेयर किनेको पाँच दिनमा सजिलै कर्जा पाइन्छ । यसले बजारलाई नयाँ उचाईमा पु–याउन सहयोग गरेको हो ।
२. नयाँ प्रविधि
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले नयाँ प्रविधि भित्र्याउने तयारी गरेको छ । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन अनुसार स्टक एक्सचेन्जले पूर्णरूपमा अनलाइन कारोबार गर्न सकिने प्रणाली ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । गैरआवासीय नेपालीसहित भविष्यमा विदेशी लगानीकर्तालाई खुला भएमा उनीहरूले समेत यो प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
प्रविधिगत आधारमा पनि बजार अब मजबुत र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्दैछ । पूर्णरूपमा अनलाइन कारोबार भएपछि लगाानीकर्ताले निकै सहज महसुस गर्न पाउँछन् । जुनसुकै ठाउँमा बसेर सेयर किनबेच गर्न पाइन्छ ।
प्रविधिको विकास भनेको पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच बढ्यो भनेर बुझ्नुपर्छ । प्रविधिले सबैलाई एक्सेस बढाइदिन्छ । प्रविधिको प्रयोग नहुँदा वा कागजी प्रणालीमा केही पहुँचवाला र ठूलाले मात्र बजारमा फाइदा लिए भन्ने विगतमा आरोप तथा गुनासा थिए ।
तर प्रविधिले सबैलाई सुविधा दिन्छ । जस्तो भनौं न मार्केट डेप्थको सुविधा छ, अहिले । यो सबैको लागि हो । नयाँ तथा साना लगानीकर्ताका लागि पनि यसमा उत्तिकै पहुँच छ । कति माग छ अनि कति कित्ता आपूर्ति छ ? कुन कम्पनीमा लगानीकर्ताको अवस्था कस्तो छ ? कति भाउ राखिएको छ भनेर जानकारी लिन सर्वसाधारणले आफैं सक्छन् । ब्रोकरको भर परिरहनुपर्दैन ।
हो, यो प्रविधिले दिएको सुविधा र पहुँच हो । यस्तै अन्य धेरै सुविधा पाएका छन्, लगानीकर्ताले । सीडीएस प्रणालीका कारण आफ्नो खाताको स्टेटमेन्ट अनलाइनमा हेर्न सकिन्छ । यस्ता प्रविधिगत विकासले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो ।
४. सेयर कर्जा सबैभन्दा सुरक्षित
बैंकले धमाधम सेयर कर्जा दिइरहेका छन् । बैंकले पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेरै यो कर्जा उपलब्ध गराएका हुन जस्तो लाग्छ । विगतको तथ्यांक के देखाउँछ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कर्जा सबैभन्दा सुरक्षित छ । सेयर कर्जाको समग्रमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम खराब ऋण रहेको छ । जबकि अन्य क्षेत्रमा गएको कर्जा धेरैमात्रामा नउठेको र एनपीएल बढेको पाउन सकिन्छ । सेयर कर्जा सुरक्षित हुँदा बैंकले यसलाई आफ्नो महत्वपूर्ण प्रडक्टका रूपमा अघि सारेका छन् । यसले पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
५. समयसापेक्ष ऐनकानुन
पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड निकै सक्रिय देखिएको छ । बजार विकासमा बोर्डको निर्णय निकै प्रभावकारी र महत्वपूर्ण हुने अवस्था छ । बोर्डले बजार विकास गर्न समयानूकुल नीतिनियम परिमार्जन गर्दैछ । बजारमैत्री नियमकानुन आउने र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने निश्चित छ ।
६. बजारका आधारभूत पक्ष बजबुत
सेयर किनबेचबाहेक बजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पु–याउने पक्ष पनि बजबुत बन्दैछन् । सामूहिक लगानी कोषको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । नागरिक लगानी कोषलाई बजार निर्माताको जिम्मेवारी दिएको छ । यसले बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको पुँजी बजारको विकास भएको देखेर विश्वमा ख्याति कमाएको अर्को क्रेडिट रेटिङ कम्पनी हाम्रो बजारमा प्रवेश गर्दैछ । यसले स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत अत्यन्तै सकारात्मक सन्देश जाँदैछ ।
७. जोखिमबाट यसरी हुन सक्छौं सुरक्षित
पुँजी बजारका बारेमा सामान्य पनि जानकारी नभई दोस्रो बजारमा सेयर किनिहाल्न हुँदैन । बजार यतिबेला माथि गइरहेको छ । बजारका आधारभूत नियमका बारेमा जानकारी नभएकाले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुपर्छ । यसो गरेमा जोखिमबाट जोगिन सकिन्छ ।
८. उपयुक्त कम्पनी छान्न जान्नुपर्छ
नेप्से परिसूचक दुई सय ९२ भएका बेला लगानी गर्नेले पनि उपयुक्त कम्पनी छनोट गर्न नसक्दा पर्याप्तमात्रामा कमाउन नसकेको देखिन्छ । त्यही बेला लगानी गर्ने कसैले दुई हजार गुणासम्म कमाएको देख्न सकिन्छ भने कतिपयले मुश्किलले २० प्रतिशत कमाएका पनि छन् । यसआधारमा कम्पनीको छनोट विशेष महत्वपूर्ण हुन्छ ।
९. वित्तीय संस्था सबल
पाँच वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रै समस्या थिए । कमाई कम थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । त्यसबेला ५ देखि १० प्रतिशत दिन सक्ने बैंक अहिले सजिलै २० प्रतिशत दिन सक्ने भएका छन् । उतिबेला २० प्रतिशत दिनेले अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत दिन सक्छन् । फेरि, चुक्ता पुँजी वृद्धि निर्णयले बैंक मर्ज र एक्विजिसनमा गएका छन् । यसले पनि दीर्घकालमा संस्था मजबुत नै बन्ने हुन् ।
१०. यसरी गर्नुपर्छ बाँकी सुधार
पुँजी बजार विकासको गतिमा अघि बढेको छ । यसका बाबजुत पनि अझै कतिपय समस्य ज्वलन्तरूपमा देखिएका छन् । अहिले पनि सूचीकृत कम्पनीको पर्याप्त सूचना पाइदैन । लगानीकर्ताका हिसाबबाट हेर्दा कम्पनीले नियामकले बाध्यकारी व्यवस्था गरेभन्दा कत्ति पनि बढी सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राख्दैनन् ।
नयाँ लगानीकर्ताले कुनै कम्पनीका बारेमा विस्तृत जानकारी लिन चाहेमा नपाउने अवस्था छ । यसमा सूचीकृत कम्पनीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङको काम गर्न दिनुपर्छ । मर्चेन्ट बैंकर ब्रोकरको कार्यक्षेत्र बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले बजारलाई अझ राम्रो बनाउन सहयोग पु–याउँछ ।
(हाथवे इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसँग नेपाली पैसाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
© Copyright 2016. All rights reserved by Nepali Paisa Media Pvt Ltd.